फिचर | Automotive News Nepal
सौरभ ज्योतिको लकडाउन गतिविधि : चेतनामूलक कार्यका साथै सकारात्मक सन्देश
अटोमोबाइल व्यवसायी सौरभ ज्योतिले लकडाउनको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न चेतनामूलक कार्य गरिरहेका छन् । उनी ज्योति ग्रुपका डाइरेक्टर हुन् । ज्योति ग्रुप अन्तर्गतको स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले नेपालमा होन्डा बाइक तथा कार आधिकारिक रुपमा बिक्री&ndas...
कोरोना भाइरसको महामारी : भारतमा यी कम्पनीको कार बिक्रीमा उच्च गिरावट
अन्य देश जस्तै भारतमा समेत अटो क्षेत्र गएको १ वर्ष देखि गम्भीर संकट परेको छ । आर्थिक सुस्ती भएको वेलामा अटो कम्पनीहरुलाई बीएस ४ लाई बीएस ६ उत्सर्जन मानकमा परिवर्तन गर्नु प¥यो । यसको कारण हरेक महिना सवारी बिक्रीमा गिरावट आएको थियो । फेरि कोरोना भ...
के हो बीएस–६ ? के छ विशेषता ? नेपालमा के प्रभाव पर्ला ?
भारतमा हिजो अर्थात् १ अप्रिल देखि बीएस–६ एमिशन नर्म्स अर्थात मापदण्ड लागू भएको छ । यसले वायु प्रदूषण कम गर्नको लागि निकै महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने छ । भारतमा यो भन्दा पहिला बीएस–४ एमिशन नर्म्स लागू हुने गरेको थियो । के हो बीएस ? भारतीय सर...
यी हुन् नेपालमा पाइने ६० लाख बढी मूल्यका गाडी
काठमाडौं – कोरोना भाइरसको संक्रमण डरले लकडाउन भइरहेको सन्दर्भमा नेपाली बजारमा बिक्री हुने महंगा गाडीको वारेमा पनि जान्नु आवश्यक छ । नेपाली बजारमा बिक्रीका लागि उपलब्ध ६० लाख भन्दा बढी मूल्यका गाडीहरुको जानकारी दिने प्रयास गरेका छ...
लकडाउनको उपयोग : अटोमोटिभ सम्बन्धी यी पुस्तक पढौ
कोरोना भाइरसको डरले हाल नेपालभर लकडाउन छ । यो समयमा अटोमोबाइलमा चासो राख्नेहरुले अटोमोबाइल सम्बन्धी विभिन्न पुस्तक पढेर समय कटाउन सकिन्छ । किन्डल वा गुगल प्ले बुक्स जस्ता एप्समार्फत डाउनलोड गरेर वा किनेरै पनि यी पुस्तक पढ्न सकिन्छ । अटोमोबाइल सम्बन्...
हेर्नुस् के फरक छ नयाँ र पुरानो मारुती सुजुकी स्विफ्ट डिजायरमा ?
मारुती सुजुकीले सब कम्प्याक्ट सेडान कार स्विफ्ट डिजायर लन्च गरेको छ । कम्पनीले सब कम्प्याक्ट सेडान कारमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन यसको इन्जिनमा गरेको छ । कारमा पावरफुल पेट्रोल इन्जिन समावेश गरिएको छ । मारुती स्विफ्ट डिजायरको एक्स शोरुम मूल्य ५ लाख ८९...
सुनसान बन्यो अटोमोबाइल क्षेत्र, सबैले जारी गर्दैछन् देशभर बन्द गर्ने विज्ञप्ति
नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले सबै व्यवसाय कमसेकम एक साताका लागि बन्द गर्न सरकारले आह्वान गर्नु पर्ने बताएको अर्को दिन अर्थात शनिबार नाडाले एक विज्ञप्ति निकाल्यो । विज्ञप्तिमा सबै अटोमोबाइल सम्बद्ध सोरुमहरु केही दिनका लागि बन्द गर्न नभने पनि घरैबाट...
के हो अलोय ह्विल ? यसका विशेषता के ? फाइदा र बेफाइदा के ?
अलोय ह्विल सवारी साधनमा प्रयोग गरिने ह्विल हुन्, जुन आल्मुनियम वा म्याग्नेसियम धातुले बनेका हुन्छन् । यी ह्विल तौलमा हलुका हुन्छन् र कारलाई स्टाइलिस लुक दिलाउछन् । कुनै पनि कारमा अलोय ह्विल प्रयोग गर्दा कारको समग्र तौल घट्छ र स्पिड तथा पर्फमेन्स बढ्...
कम्तीमा एक हप्ता कारोबार बन्द गर्नु पर्ने नाडा अध्यक्ष दुलालको भनाइ
अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले कम्तीमा एक हप्ता सम्म कारोबार बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हरेक व्यावसायिक क्षेत्र धराशायी हुन लागेको अवस्थामा मानिसको...
विद्युतीय स्कुटर किन्ने हो ? यी ७ बैंकबाट पाइन्छ फाइनान्स सुविधा
काठमाडौं – विश्वमै लोकप्रिय मानिने एनआईयू (NIU) ब्रान्डका विद्युतीय स्कुटर किन्नका लागि ७ बैंकहरुले सहज फाइनान्स सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छन् । एनआईयूको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक इको इन्फिनिटीको समन्वयमा यी बैंकहरुले फाइनान्सको व्...
बाइक वा कारलाई कोरोना भाइरसबाट कसरी सुरक्षित राख्ने ? यी पार्टस् सबैभन्दा खतरनाक
कोरोना भाइरस मानिस मात्र होइन, विभिन्न साधनहरुबाट पनि फैलिएको हुन्छ । कोरोना भाइरस फैलिनबाट बच्नको लागि कमसेकम यात्रा गर्नुका साथै सामाजिक समारोहमा कमसेकम भाग लिनु पर्छ । कार वा बाइकको पनि विशेष सरसफाई राख्नु पर्छ । भ्याकुम क्लिनरसडकमा उड्ने धुलोको...
के छ फरक नयाँ र पुरानो हुन्डाई क्रेटामा ?
२०२० हुन्डाई क्रेटा लन्च गरिएको छ । सो क्रेटाको सेकेन्ड जेनेरेसन मोडल हो । यसको लुक पुरानो मोडल भन्दा फरक रहेको छ । साथै यसमा नयाँ अपडेटड फिचर पनि समावेश गरेको छ । नयाँ हुन्डाई क्रेटा पुरानो मोडल भन्दा बोल्ड, मस्क्युलर र स्पोर्टी रहेको छ । यसको फ्रन...
नयाँ कार किन्ने हो ? २५ लाख भन्दा कम मूल्यमा उपलब्ध छन् ५ कम्पनीका यी ५ कार
पहिलो पटक कार किन्नेहरुका लागि इन्ट्री लेवलका कार उपयुक्त मानिन्छन् । नेपाली बजारमा ड्याटसन, सुजुकी, रेनो, हुन्डाई र टाटाका कार इन्ट्री लेवलका लागि उपयुक्त छन् । सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने यी कार ह्याचब्याक मोडलमा उपलब्ध छन् । नेपाली बजारमा पाइने सबै...
गाडीमा हुने सुरक्षा फिचर एबीएस र ईबीडी के हो ? गाडीको लागि कति महत्वपूर्ण छ?
कारमा हुने सुरक्षा फिचरमा एबीएस र ईबीडी बारेमा सुन्नु भएकै होला । हाल गाडीमा सुरक्षाको लागि एबीएस र ईबीडी फिचर हुनु अनिवार्य भइसकेको छ । कारको लागि एबीएस र ईबीडी कति महत्वपूर्ण छ त । एबीएसको पुरा अर्थ एन्टि–लक ब्रेकिङ सिष्टम हो । सो फिचरले बाइ...
राम र कार्लोस : बाइक स्टन्टमा रमाउदै
राम सरदारले बाइक स्टन्ट गर्न थालेको करिव ९ वर्ष जति भयो । बाइक चलाउदै अभ्यास गर्दा गर्दै उनी आफैले यसरी स्टन्ट गर्न सिकेका थिए । भन्छन् ‘यसो हेर्दै साथीभाइसँग सिक्दै मैले पनि स्टन्ट गर्न सिके ।’ कार्लोस दुलाल अर्को बाइक स्टन्टर हुन् । उन...
सुन्दर यातायातका चार विद्युतीय बस गुड्दै रिङरोडमा, आधा घण्टा पर्खेर पनि चढ्छन् यात्रु
काठमाडौं – राजधानीको रिङरोडमा सुन्दर यातायातका चार वटा बिद्युतीय बस गुडिरहेका छन् । सुन्दर यातायातले गत भाद्र महिनाको अन्तिम सातामा दुईवटा बसबाट सेवा प्रारम्भ गरेको थियो । पछि दुईवटा बस थप गरेर सेवा प्रदान गरिरहेको छ । हाल चारवटा बस मात्र संचा...
अमेरिका निवासी स्टार भन्छन् : यस्तो छ अमेरिकाको ट्राफिक नियम र लोकप्रिय कार ब्रान्ड
स्टार श्रेष्ठ हाल अमेरिकाको एरिजोना राज्यस्थित मेरीकोपा काउन्टीमा बस्छन् । उनी क्याप्को फोनिक्सका कन्सल्टेन्ट हुन् भने नेपालमा समेत कार्यालय रहेको रेन्बो टेक्नोलोजिजका डाइरेक्टर पनि हुन् । उनले अमेरिकाको ट्राफिक नियम र सडकको अवस्था तथा लोकप्रिय...
स्पयेर पार्टस् ब्यवसायमा स्थापित हुने क्रममै छौ
रिद्धि कार्की श्रीदुस इन्टरनेसनलका डाइरेक्टर हुन् । सन् २००३ मा अलुनी ब्रेक्स लिमिटेडबाट उनले अटोमोबाइल क्षेत्रको यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए । यसले गाडीको ब्रेक बनाउथ्यो र उनले यसको बिक्री प्रतिनिधिको रुपमा कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । सन् २००८ सम्म यस...
मारुती सुजुकी भिटारा ब्रेजा : के फरक छ पुरानो र नयाँ मोडलमा ?
मारुती सुजुकीले हालै नयाँ भिटारा ब्रेजा भारतमा सार्वजनिक गरेको छ । पुरानो मोडल भन्दा नयाँ मोडलमा केही कस्मेटिक परिवर्तन गरिएको छ । साथै यसमा अपडेटेड फिचर पनि समावेश गरिएको छ । सो कारमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन यसको इन्जिनमा गरिएको छ । मारुती सुजुकी ब्...
सस्तो इलेक्ट्रिक कार चढ्न मन छ ? शुरुमा ३ लाख ८० हजार तिरे पुग्छ
काठमाडौं – सस्तो इलेक्ट्रिक कारको खोजीमा भएकाहरुका लागि गजव विकल्प नेपाली बजारमै उपलब्ध छ । नेपाली बजारमा उपलब्ध दिगो E8 ब्रान्डको इलेक्ट्रिक कार शुरुमा ३ लाख ८० हजार तिरे पुग्छ । यसको मूल्य १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ । इलेक्ट्रिक कारमा...
स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भयो, तर लिन आएनन्
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले मास प्रिन्टर ल्याएर लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न थालेसँगै विभागमा लाइसेन्सको चाङ लागेको छ । लाइसेन्स परिक्षा पास गरेको केही महिनासम्म नियमित फलोअपमा रहनेले पनि लाइसेन्स तयार भएपछि लिन नआउने गरेको विभागले जनाएको छ । विभाग...
यात्रुको आकर्षण बढ्दैछ विद्युतीय बसमा
काठमाडौं – एकान्तकुनाकी सम्झना घले केही समय कुरेर भए पनि विद्युतीय बसमा यात्रा गर्छिन् । अरु बसभन्दा आवाज नआउने, गन्ध नआउने भएकाले उनले विद्युतीय बस चढ्ने गरेकी हुन् । विद्युतीय बसमा यात्रा गर्न सहज भए पनि बस नै कम भएको उनको गुनासो छ । उनले भन...
नाइट स्टन्ट शो : धुलिखेलको नाइटमा बाइकलाई यसरी उडाइयो हावामा (भिडियो सहित)
काठमाडौं – भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा धुलिखेलमा गत फागुन २ गते बेलुकी जीपीएक्स बाइकर्स नाइट आउट २०२० कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सो नाइट आउट कार्यक्रमको अवसरमा धुलिखेलको हिमालयन मोटरल्यान्डमा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरिएको थियो । मोटर स्प...
यस्ता छन् नेपाली बजारमा बिक्री हुने मोटरहेडका बाइक (मूल्य सहित)
काठमाडौं – नेपाली बजारमा मोटरहेडका पाँच मोडलका बाइक बिक्री भइरहेका छन् । एसएलआर टेक्नो एन्ड ट्रेड प्रालिले मोटरहेडका बाइक बिक्री–वितरण गरिरहेको छ । नेपाली बजारमा टेक्कन २५०, स्क्र्याम्बलर २५०, स्पोर्ट्स २५० र एमएच २०० गरी चार मोडलका बाइ...